प्रत्येक श्वासमा जोखिम :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
छापाबाट काठमाडौं. चैत १५
सामान्यतया सहर भन्नासाथ ठूलो जनसंख्या, फराकिला सडक, सफा र ठूला फुटपाथ, खुला पार्क र चौरको छवि दिमागमा आउँछ । तर, अहिले काठमाडौं आइपुग्नेले यो सहरमा अर्को एउटा विशेषता पाउनेछ, सहरवासीको मुख ढाक्ने मास्क † सडक विस्तार, ढल सुधार र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप जडानका लागि पछिल्लो समय गरिएको उत्खननले काठमाडौं खाल्डोलाई स–साना ‘खाल्टा’ को सहरमा परिणत गरिदिएको छ । र, यहाँको वायुमण्डललाई ‘धुलीमण्डल’ मा । त्यसमाथि पुराना गाडीले फ्याँक्ने विषाक्त धूवाँ त छँदै छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
पैदल यात्रु हुन् वा सार्वजनिक सवारी र मोटरसाइकलमा हिँड्ने, घरबाट निस्कनुअघि मास्क छ कि छैन भनेर गोजी छाम्नु सहरवासीको दैनिकीभित्रै पर्न थालेको छ । पैदलयात्रा गर्दा लाग्छ, सहरमा मानिसको अनुहार बिस्तारै उस्तै हुँदै छ । जसरी पसलका सामान प्लास्टिक र त्रिपालले छोपेर राखिन्छ, त्यसरी नै मानिसको अनुहार मास्कले छोपेको देखिन्छन् । मास्क लगाएर पैदल यात्रा गरिरहेका यात्री राजधानीमा मास्क खोलेर लामो सास फेर्ने दिन कहिले आउला ? मुहार देखाएर चक्रपथ परिक्रमा गर्न कहिले पाइएला भन्ने प्रश्न गर्छन् । तेल लगाएर हिँडेका मानिसका कपालमा धुलो भरिएर फुस्रो मात्र हँुदैन, सेतो लुगा कालो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १४, २०७४, ०७:२२:२५